David Luiz Oo Shaaca Ka Qaaday Sabab tii Ku kaliftay inuu ku so laabto chealse, - Hablaha Media Network
David Luiz Oo Shaaca Ka Qaaday Sabab tii Ku kaliftay inuu ku so laabto chealse,
HMN:- David Luiz ayaa sheegay inuu ku jiray dareen ah inuu mar kale u ciyaari doono Chelsea ka dib markii uu dhameystiray ku soo laabashadiisa Stamford Bridge. Gurigi lacgta walida ah uu kaga tagay 2 sano ka hor,
Daafaca reer Brazil ayaa dib ugu soo laabtay Blues ka dib markii ay PSG ku qanciyeen shalayto 32 milyan ginni, labo sanno ka dib markii ay Blues daafacaan ka iibisay kooxda Faransiiska. isago Waliba kooxdisa chealse ku bahdilay champions leag xili uu ka reebay isagoona ku dabaal dagay balse ugu danbeyn raali gali yay jamaahiirta Blues,
Laakiin daafaca oo 29 sanno jir ah ayaa u muuqda inuu yahay shaqsiga kaliya ee aysan lama filaan ku noqonin saxiixii shalayto.
Luiz ayaa yiri: “Miyaan ku fekerayay inaan halkaan ka ciyaari doono mar kale? Kubada cagta wax walba waa ay dhici karaan. Cid walba ayaa og dareenka aan u hayo kooxdaan.
“Cid walba ayaa og taas. Dabcan mararka qaar waan qiyaasi jiray inaan ku soo laabanayo Chelsea.
“Waan ku faraxsanahay inaan halkaan joogo mar kale. Waa fantastik inaan helay fursad labaad oo aan ugu ciyaaro kooxdaan, waan jeclahay kooxdaan, waana sababta aan halkaan u joogo. Aan isku dayno inaan sii wadno taariikhda fiican iyo farxada badan oo aan isku dayno inaan guulo gaarno.
“Waxa ay ii noqon doontaa fursad cajiib ah inaan tuso taageerayaasha mar kale sida aan u jeclahay kooxdaan iyo sida aan u jeclahay inaan u ciyaaro kooxdaan, Waa sugi weysanahay inaan xirto maaliyada oo aan ka ciyaaro Stamford Bridge mar kale.